Xubintii Ciyaaraha: Manchester United fkf Tottenham Hotspur? (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha: Manchester United fkf Tottenham Hotspur? (dhegayso)
Oktoobar 28, 2017 1:37 b 0
Waxaa dib loo ciyaari doona kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska waana kulamadii tobnaad. Garoonka masraxa riyada ee Old Trafford waxaa ka dhici doona kulanka isbuucan ugu xiisaha badan, waana Manchester United iyo Tottenham Hotspur.
Dhanka horyaalka Spain waxaa la ciyaari doona kulamo adag, kooxda hogaaminaysa horyalka ayaana booqan doonta San Mames Barria ee kooxda Athletic Bilbao. Tabaraha kooxda Barcelona ayaa asna dib ugu laaban doona kooxdiisii hore.
Kulanka Haweenka – Taxanaha 18aad: Hormarka haweenku waa hormarka dalka (dhegayso)